ひなまつりについて　ဟိနအရုပ်ပွဲတော်နှင့်ပတ်သက်၍About the Doll's Festival | WeXpats Guide
ひなまつりについて　ဟိနအရုပ်ပွဲတော်နှင့်ပတ်သက်၍About the Doll's Festival
Hinamatsuri သည်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်သောပွဲတော်ဖြစ်ပြီးမိန်းကလေးများ၏ကျ န်းမာသန်စွမ်းမှုအတွက်ဆုတောင်းပေးသောပွဲတော်ဖြစ်သည်။
ဟိနအရုပ်များ (ယောက်ကျားလေး၊မိန်းကလေးများကိုအဓီကတန်ဆာဆင်ထားသည့်အရုပ်များ) ကို ချယ်ရီပွင့်၊ တာချီဘာန၊မက်မွန်ပန်းပွင့်များ၊အရွက်များဖြင့်အလှဆင်ခြင်း၊ ဟိနမုန့်၊ဟိရှိကောက်ညှင်း၊အရက်အဖြူရောင်နှင့်နှင့် chirashizushi စသည့်သုံးဆောင်စရာများနှင့် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောပွဲတော်ဖြစ်သည်။
Hinamatsuri သည်မိန်းကလေးများ၏ကျန်းမာသန်စွမ်းမှုအတွက်ဆုတောင်းပြုသည့်ပွဲတော်တ စ်ခုဖြစ်သည်။ Peach Festival ဟုလည်းခေါ်သည်၊ ဟိနာအရုပ်များကိုချယ်ရီပန်းပွင့်များ၊ မက်မွန်ပန်းပွင့်များ၊ ဟီနာမုန့်ကျွတ်နှင့်ဟိရှီမိုကောက်ညှင်းများဖြင့်အလှဆင်ပြီး chirashizushi နှင့် ဟမဂုရိခရုစွတ်ပြုတ်ဟင်းပွဲများဖြင့်ပျော်မွေ့နိုင်သည့်ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ Hina အရုပ်များကိုအလှဆင်ခြင်းကဲ့သို့သောပွဲများကိုကျင်းပကြသည်။
ဤ "Hina အရုပ်" ကိုမိန်းကလေး၏မကောင်းသောကံများကိုလွှဲပြောင်းပေးခြင်းနှင့်သူမအစားးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အမှန်မှာမူရင်းဟီနပွဲတော် သည် "မိန်းကလေးများအတွက်" မဟုတ်ပါ။
မတ်လ (၃) ရက်နေ့တွင် (Kamimi no Sekku) ကျင်းပသောဟိန္ဒူဆူရှုရိပွဲတော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ရေစွန်းရှိခန္ဓာကိုယ်နှင့်ကပ်လျက်ဒဏ်ရာများကိုဖယ်ရှားရန်ကာလကြာရှည်စွာထုံးစံရှိသည်။ Hina ယဉ်ကျေးမှု၏အစအ ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။
Heian ကာလတွင် Nagashi Hina သည်အစားထိုးအရုပ်အဖြစ်မြစ်ထဲသို့အရုပ်များထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ရောဂါကင်းစင်သည့်ဘဝအတွက်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အရုပ်များနှင့်ကစားသည့် Hiina Asobi သည် Heian အထက်တန်းလွှာကလေးများကြားတွင်လူကြိုက်များခဲ့သည်။
အဲဒိုခေတ်တွင်ဟီနာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံများသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်များသာမကလူအများနှစ်သက်လာစေရန်အများပြည်သူထံပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ဟီနာအရုပ်များကိုအလှဆင်သည့်အစဉ်အလာကိုမတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင်ယနေ့ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သို့သော်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နတ်ဆိုးများကိုသူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုစက္ကူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအရုပ်ဖြင့်ထိုးနှက်ခြင်းအားဖြင့်သုတ်သင်ရှင်းလင်းသည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိသည်။ မကောင်းမှုများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အရုပ်များပစ်ခြင်းသည်ဓလေ့ထုံးစံဖြစ်ပြီးယနေ့ထိတိုင်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သောဟင်နမာဆူရီပွဲတော်ဖြစ်သည့်“ Nagashi Hina” ဖြစ်သည်။
・ ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် - "လူသားနေ့ (Nanakusa-gayu)"
・ မတ်လ ၃ ရက်“ Kamimi (Peach Festival)”
・ မေလ ၅ ရက် (Tango (iris festival))
July ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့တွင် "Tanabata (Star Festival)"
・ စက်တင်ဘာ ၉ ရက်“ Chuyo (Kiku no Sekku)”
ကလေးများနှင့်ကစားခြင်း "Hina ကစားခြင်း"
"Kamimi" ကျယ်ပြန့်လာသည့်အချိန်တွင်ဟိုင်ယန်ခေတ်ရှိမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်ကလေးများအကြားတွင် "Hina Asobi" ဟုခေါ်သည့်အရုပ်ပြဇာတ်သည်လူကြိုက်များခဲ့သည်။ ဤ "Hina" နှင့် "Hina" တို့သည်သေးငယ်။ ချစ်စရာကောင်းသောအရာများဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤအရုပ်နှင့် Kamimi တို့ပေါင်းစပ်ပြီးလက်ရှိ "Hinamatsuri" ၏ရှေ့ပြေးပုံစံဖြစ်လာသည်ဟုယူဆကြသည်။
လူအများက“ ဟီနာအရုပ်ကိုဘယ်တော့စပြီးအလှဆင်တာလဲ၊ ဒီကနေငါအရုပ်တွေနဲ့အဆင်တန်ဆာတွေအလှဆင်ဖို့အချိန်အကြောင်းကောလာဟလများကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကိုအနည်းငယ်စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေတဲ့ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပါ၊ ဒါပေမယ့်ဒါဟာအယူသီးမှုတစ်ခုထဲပါ။ ထို့ကြောင့်သင့်ကလေးသို့မဟုတ်မိသားစုမပျော်မွေ့မချင်းယင်းကိုအလှဆင်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုအလွန်အမင်းစိုးရိမ်စရာမလိုပါ။
ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်မှ စ၍ ဟီနာအရုပ်များကိုမတ်လ ၃ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဟိန္ဒူအူဆုရီသို့အလှဆင်သည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော်၊ Hina အရုပ်များကိုမည်သည့်အချိန်တွင်အလှဆင်ရမည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါ။ ထို့ကြောင့်ရောဂါကင်းစင်သည့်ဘဝအတွက်သို့မဟုတ်အခန်းအတွင်းခန်းအဖြစ်၎င်းကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးအလှဆင်နိုင်သည်။
သို့သော်ဟီနာအရုပ်များသည်နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်အပူချိန်နှင့်အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့်စိုထိုင်းခြင်းတို့ကြောင့်ပျက်စီးနိုင်သဖြင့်မိုးရာသီနှင့်နွေရာသီတွင်မကြာခဏသိုလှောင်လေ့ရှိသည်။ အရုပ်ကိုမိုးရာသီတွင်အေးဆေးစွာနေရောင်ခြည်ဖြင့်အလှဆင်ရန်အကြံပြုသည်။ သင်၏ကလေးအတွက် Talisman ဖြစ်မည့်ကြက်တစ်ကောင်ဖြစ်သောကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ သေချာစွာကိုင်တွယ်ပါ။
Hinamatsuri ၏နေ့သည်မတ်လ ၃ ရက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Hina အရုပ်များပေါ်ထွက်လာသည်ကိုသင်မြင်ဖူးပါသလား။ Hina အရုပ်တွေကိုဘယ်လောက်ကြာပြသသင့်သလဲ။
ဘယ်အချိန်မှာ Hina အရုပ်ကိုအလှဆင်တာလဲ။
Hinamatsuri တွင် Hina အရုပ်များကိုအလှဆင်ရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာမျောက်ကောင်များထုံးစံအတိုင်းမိန်းကလေး၏အညစ်အကြေးကိုအရုပ်များထဲသို့လွှဲပြောင်း။ ဘေးအန္တရာယ်ကိုအစားထိုးအဖြစ်လွှဲပြောင်းယူရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မတ် ၃ ရက်နေ့တွင်သာမက apotropaic မှော်အတတ်၏အဓိပ္ပာယ်ရှိသောကြောင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာပြသနိုင်သည်။ အလှဆင်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်သည်ဖေဖော်ဝါရီလလယ်၊ ရာသီအလှ၊ နွေ ဦး ရာသီနှင့် setubun bean မျိုးစေ့ကြဲပြီးနောက်နတ်ဆိုးများကိုဖယ်ရှားရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အချိန်ကောင်းမသတ်မှတ်ရသေးတဲ့အတွက် Hinamatsuri မတိုင်ခင်တစ်ပတ်လောက်မှာအလှဆင်ကြစို့။
Hinamatsuri ပင်မတ်လ3ပြီးနောက်?
ဟီနာအရုပ်များသည်မတ်လ ၃ ရက်နောက်ပိုင်းတွင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လိုသည်ဟုဆိုသော်လည်းမတ်လတစ်လျှောက်လုံးတွင်အရုပ်များကိုအလှဆင်သည့်ပွဲများစွာရှိသည်။
amပြီလအစတွင်လပြက္ခဒိန်၏မတ်လ ၃ ရက်တွင်ဟိမမတ်စူရီ၏အမြစ်များ Kamimi ပွဲတော်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်theရိယာပေါ် မူတည်၍ Hina ရုပ်များသည်Aprilပြီလအစောပိုင်းသို့မဟုတ်မတ်လကုန်အထိပြသသည်။
အမျိုးမျိုးသောနေရာများတွင် Hina အရုပ်မျိုးစုံရှိသည်။ ဥပမာ ၇ ထပ်ပါသောအဆင်တန်ဆာများနှင့်ဆွဲထားသည့် "Hina အရုပ်များ" ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ၇ လွှာရှိအလှဆင်ထားသောဟီနာအရုပ်အမျိုးအစားများကိုမိတ်ဆက်မည်။
ထိပ်မှာဇိမ်ခံဝတ်စုံအတွက်လူနှစ် ဦး ။ အမှန်မှာ၎င်းသည်ဘုရင်မင်းမြတ်နှင့်pressကရာဇ်တို့ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ကျော်ကြားသော "မင်္ဂလာဟင်နာမတ်ဆာရီ" ၏စာသားများတွင်၎င်းကို "Ouchiura-sama နှင့် Hina-sama" ဟုဖော်ပြသည်။ Uchiura-sama သည်သခင်နှင့်မင်းသမီးနှစ်ပါးစလုံးကိုရည်ညွှန်းသည့်စကားလုံးဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်မှားသည်။ သီချင်း၏ရေးသားသူသည်သူ၏နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင်လည်းနောင်တရခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး၏ပါ ၀ င်မှုကိုတည်းဖြတ်သည်။ ၂၀၂၀.၀၃.၀၃ အယ်ဒီတာဌာန)
တရားဝင်အမျိုးသမီးသုံး ဦး (sanninkanjo)
၎င်းတို့သည်အတွင်းကျောနှင့်အရုပ်များကိုအစေခံသည့်စမတ်အိမ်ဖော်သုံး ဦး ဖြစ်သည်။ ညာဘက်အခြမ်းမှာတော့ငါရှည်လျားသောကက်စတို, သုံးဘက်နှင့် Choshi ရှိသည်။
Noh ဂီတကစားသောယောက်ျားလေးငါးယောက်။ လက်ျာဘက်မှာငါ၌သီချင်းတစ်ပုဒ်, ပုလွေ, သေးငယ်တဲ့စည်, ကြီးမားသောစည်နှင့်စည်ရှိသည်။
ဒါဟာအတွင်းပိုင်းကျောနှင့်အရုပ်များကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည်လက်ျာ ၀ န်ကြီး (လက်ဝဲ၊ လူငယ်) နှင့်လက်ဝဲ ၀ န်ကြီး (လက်ယာ၊ အဘိုး) ။
ဟိမင်ဆူရီ၏ထူးခြားသောဟင်းလျာများအနက်တစ်ခုမှာစိန်ပုံစံသုံးရောင်ဆန်သောကိတ်မုန့် "Hishimochi" ဖြစ်သည်။ ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ?
ရာသီ၏အလှည့်ဖြစ်သော "Sekku" တွင်နတ်ဆိုးများကိုဖယ်ရှားရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တက်ကြွစေရန်ရာသီအလိုက်အပင်များကိုစားခြင်းဓလေ့ရှိသည်။ ဟိမင်ဆူရီ၏ဇာစ်မြစ်တစ်ခုဖြစ်သော "ကင်မီ" ပွဲတော်တွင်မိခင်နှင့်ကလေးမြက်များမှပြုလုပ်သောဆန်ကိတ်မုန့် (နွေ ဦး ပျိုးပင်ခုနစ်လုံးမှ "Gogyo") ကိုစားခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ Mugwort ကိုအချို့သောဒေသများတွင်အသုံးပြုသော်လည်း၎င်းသည် "အစိမ်းရောင်" Hishi mochi ၏အမြစ်ဖြစ်သည်။
အဲဒိုခေတ်နောက်ပိုင်းတွင်ဤအစိမ်းရောင်ကိတ်မုန့်သည်လက်ရှိဟီရှီမိုချိ၏အနီရောင်၊ အဖြူနှင့်အစိမ်းရောင်တို့၏ပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်လာသည်။ "White" သည်အစိမ်းရောင်ကိတ်မုန့်တွင်ပထမဆုံးပါဝင်ခဲ့သည်။ "Hishi-no-mi" ကိုဆန်ဖြူကိတ်မုန့်အတွက်အသုံးပြုသည်၊ ၎င်း Hishi-no-mi သည်သားစဉ်မြေးဆက်များကိုကြီးပွားတိုးတက်စေမည့်အသီးတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုထားသည်။ ထိုနောက်မှအနီရောင်ကို Meiji ခေတ်အစမှသာထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ရှေးခေတ်ကမကောင်းမှုများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အဓိပ္ပာယ်ရှိသောအနီရောင်သည် ထပ်မံ၍ သုံးရောင်စုံဟိရှီ mochi ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
Credit to https://omatsurijapan.com/blog/about-hinamatsuri/#:~:text=%E3%81%B2%E3%81%AA%E7%A5%AD%E3%82%8A%E3%81%AF%E5%A5%B3%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%81%A5%E3%82%84%E3%81%8B,%E3%81%8C%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82